'गल्ती भए माफी माग, महिलालाई हेपे भन्दै आँसु नझार'
काठमाडौं : सामाजिक सञ्‍जाल चलाउन छाड्छु भनेर आफैँसँग कसम खाएको यो कति पटक हो? कहिलेकाहीँ आफैँसँग प्रश्न गर्छु। लाज मान्दै हिसाब गर्न छोडेको महिनौं भएको सम्झन्छु। लत लागेपछि कसम पनि फ्याट्ट फुटिजाने पानीका फोका हुन थाले। खायो। भुल्यो। हिँड्यो। फेसबुक र ट्विटर ...
हो, आज हामी युवाहरू स्वस्फुर्त भेला भएर सरकारलाई विनम्रतापूर्वक आफ्ना कुरा राख्दै सचेत पनि गराएका हौँ। हामी कुनै समुह र पार्टीका कार्यकर्ता होइनौं, हामी देशका युवा सपुत हौँ। देशप्रेम हामीमा पनि छ। सरकारको कामको फल हामीले पनि महसुस गर्न पाउनुपर्छ। सरकारका रा...
संयोग लम्साल म एकजना छिमेकीको बिहेमा गएको थिएँ। बिहे धुमधामले नै भएको थियो। चारैतिर चहलपहल थियो र बेहुला, बेहुलीसँगैअरू सबै पनि खुसी नै देखिन्थे। तर, पछाडि पार्किङ गर्ने ठाउँको एक कुनामा उभिएर बेहुलीका बुवा आँसु झारिरहनु भएको रह...
प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंलाई काम गर्न कसले रोकेको छ?
नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो केही दिनयता प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ नेकपाभित्र आश्चर्यजनक गतिविधि देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनको सरकारबारे पार्टीभित्रैबाट विकल्प खोजिँदै छ। यसको मुख्य कारक स्वयम् प्रधानमन्त्री हुन् भन्दा केही फरक पर्ने देख्दिनँ। म यहाँ मेरो...
रेशम थापा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले विसं.२०५२ मा ५०७ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेर मध्यवर्ती क्षेत्र कायम गर्‍यो। जसको उद्देश्य त्यस क्षेत्रका जनताले निकुञ्जमा नोक्सानी नगरी, वा वन पैदावर सामग्रीको अवैधानिकरुपमा निकासी नगरी मध्यवर्ती क्षेत्रको संरक्षण, सम्बर्द्...
जाडो महिना एउटा बिहानी। मौसम थियो। सिरसिर चिसो बतास मुटु नै लुकलुक कमाउने गरी चलिरहेको थियो। चिसोलाई भुल्न म कोठामा कफीसँग एक्लै रम्दै बसिरहेको थिएँ। अकस्मात् मेरो फोनमा घण्टी बज्यो। म मोबाइल खोज्न लागेँ। राख्ने ठाउँ निश्चित भए पो सह...
काठमाडौंः हरेक दिन अखबारका पानाहरूमा तराई मधेस केन्द्रित समाचार आइरहन्छन्। गरिबी, अशिक्षा र दमनले आक्रान्त समाजका ती तमाम घटनाले नेपालका राष्ट्रिय मिडियाले स्थान दिने गर्छन्। लाग्छ कि, 'वर्षौंदेखि शोषणमा परेको क्षेत्रमा सरकारको नजर पुग्न कि ठूलै घटना घट्नुपर्...
छाउगोठ होइन, मानसिकता भत्काऊँ
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छाउगोठहरू भत्काउने अभियान चलिरहेको छ। गृह मन्त्रालयले पुस ९ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई छाउपडी प्रथा नियन्त्रण गर्न निर्देशन पत्र पठायो। निर्देशन पाएलगत्तै यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले छाउगोठ भत्काउन उर्दी जारी गरे। गोठ भत्काउन प्रहरी टो...
शनिबारको दिन अन्य दिनको तुलनामा केही शान्त छ काठमाडौं। यसै दिन आफूलाई भने सहचालकको क्‍लास लिने अवसर जुटेको छ। सहचालकको क्‍लास लिनका लागि त्यति दु:ख गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। काठमाडौंभित्र सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गरियो भने सजिलै पाइन्छ। सामान्यत: सहचा...
तपाईंले संघीय राजधानी सहर काठमाडौंमा सार्वजनिक यातायातको अनुभव लिनु भएको छ? साना र पुराना गाडीमा कोचाकोच मान्छेसहित यात्राको अनुभवले नै तपाईंलाई धेरै कुरा सिकाउँछ। देशकै सुविधाको केन्द्र राजधानीको सार्वजनिक यातायातको अनुभव यो ब्लगमार्फत यहाँ पस्किँदैछ...
सपना र वास्तविकता
कहाँबाट सुरु हुन्छ कहानी, कहाँबाट अन्त्य। ठ्याक्कै यो कहानीको आदि र अन्त्य छैन। यो कुनै सुनौलो बिहानको एउटा कहानी हो। बिहान एक्कासि ५ बजे निद्राबाट ब्युम्झिएँ म। मोबाइलमा बिहानको संकेत स्वरूप अलार्म बज्न बाँकी नै थियो। बिहानको ड्युटीले सवेरै उठ्नुको विकल्प पनि ...
०७४ साल अर्कै थियो। तपाईंले ख्याल गर्नुभयो? मैले त मज्जाले गरेँ। बादल लागेजस्तो, धुम्म। रिङरोडको धुलो बाटोमा हिँड्दाजस्तो, उराठ। ०७४ साल खासमा बिग्रिएको चित्रजस्तो थियो, खाल्डाखुल्डी परेको बाटोजस्तो। कम्तीमा मेरालागि यस्तै थियो। मिलाउँदा मिलाउँदै पनि जिन्दगीको लय ...
काठमाडौं : अस्ट्राबक्र, यज्ञवल्लभको शहर पनि हो जनकपुर। जनकपुरलाई राजा जनकको शासनको सीप सिकाउने शहरको रूपमा लिइन्छ। ५२ कुटी, ७२ कुण्ड भएको शहर पनि हो र। मिथिला सभ्यताको सुशोभित शहर पनि जनकपुर नै हो। स्कुल तथा कलेजमा मैले जनकपुर बारे पढेको स...